पाइपलाइनमा एघार हाइड्राेपावरकाे आइपिओ , कुन कुन छन् ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyपाइपलाइनमा एघार हाइड्राेपावरकाे आइपिओ , कुन कुन छन् ?
पाइपलाइनमा एघार हाइड्राेपावरकाे आइपिओ , कुन कुन छन् ?
शेयर बजारमा आइपिओकाे लहर चलेकाे छ । पछिल्लाे समय करिब ३१ लाखभन्दा बढिकाे डिम्याट खाता खुलिसकेकाे छ । केही समययता आइपिओ पाउन गाेलाप्रथाकाे भर परिरहनुपरेकाे छ ।
नेपाल धिताेपत्र बाेर्डमा आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्ने कम्पनीहरूकाे उस्तै लाइन लागेकाे छ। काेही अनुमति पाएर आइपिओ निष्कासन गर्न सफल भइसकेका छन् भने काेही डकुमेन्ट नपुगेर पाइपलानमा नै बसिरेका छन् । तीमध्ये ११ वटा हाइड्राेपावर कम्पनी छन् जाे पाइपलाइनमा पालाे कुरेर बसिरहेका छन् । कुन कुन हुन त ती कम्पनी ?
१. साहस उर्जा लिमिटेड
एनआइबिएल एस क्यापिटल बिक्री प्रबन्धककाे रूपमा रहेकाे साहस उर्जा लिमिटेडले साेलु खाेला (दूधकाेशी) जलविद्युत परियाेजना निर्माण गरिरहेकाे छ ।
कम्पनीले १ अर्ब ५ कराेड बराबरकाे १ कराेड ५ लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्न लागेकाे हाे । गत माघ २४ गते नै धिताेपत्र बाेर्डमा आवेदन दिएपनि कम्पनीले अनुमति भने पाइसकेकाे छैन ।
२.सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड
नेपाल एसबिआइ मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड बिक्री प्रबन्धककाे रूपमा रहेकाे सामलिङ पावर लिमिटेड ले १२ लाख ३० हजार कित्ता आइपिओ जारी गर्न अनुमति मागेकाे छ । गत माघ ५ गते आवेदन दिएकाे भएपनि हालसम्म अनुमति भने पाइसकेकाे छैन ।
३. बुद्धभूमी नेपाल हाइड्राेपावर कम्पनी लिमिटेड
बुद्धभूमी नेपाल हाइड्राेले नेपाल धिताेपत्र बाेर्डमा गत माघ ८ गते आइपिओ निष्कासनका लाग निवेदन दिएकाे थियाे । १२ लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति मागेकाे कम्पनीकाे बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेकाे छ ।
दुई लघुवित्त कम्पनीकाे आइपिओ आउँदै
४.सयपत्री हाइड्राेपावर लिमिटेड
गत फागुन २० गते नेपाल धिताेपत्र बाेर्डमा आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएकाे सयपत्री हाइड्राेपावर लिमिटेडले ९ लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्ने भएकाे हाे । कम्पनीकाे बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल रहेकाे छ ।
५. बलेफी हाइड्राेपार
३६ लाख ५५ हजार ९ सय ४० कित्ता आइपिओ जारी गर्न लागेकाे बलेफी हाइड्राेकाे बिक्री प्रबन्धक ग्लाेबल आइ एम इ क्यापिटल रहेकाे छ । कम्पनीले आइपिओ जारी गर्न गत फागुन २५ गते धिताेपत्र बाेर्डमा आवेदन दिएकाे थियाे ।
६. ग्रीन भेन्चर लिमिटेड
६२ लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्न लागेकाे ग्रीन भेन्चरले नेपाल धिताेपत्र बाेर्डमा फागुन २८ गते निवेदन दिएकाे थियाे । कम्पनीकाे बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल रहेकाे छ ।
सेयर बजारमा यसरी बन्नुहाेस स्मार्ट लगानीकर्ता
७. हिमालयन हाइड्राेपावर
हिमालयन हाइड्राेपावर लिमिटेडले २२ लाख ५० हजार कित्ता आइपिओ जारी गर्नका लागि नेपाल धिताेपत्र बाेर्डमा २०७६ साल कार्तिकमा निवेदन दिएकाे थियाे । धिताेपत्र बाेर्डले आवश्यक कागजात नपुगेकाे भन्दै कागजात माग गरेपछि यसकाे कागजात भेरिफाइ प्रक्रिया जारी रहेकाे धिताेपत्र बाेर्डले जानकारी दिएकाे छ।
८.मैलुङखाेला जलविद्युत आयाेजना
मैलुङखाेला जलविद्युत आयाेजनाले नेपाल धिताेपत्र बाेर्डमा २०७४ साल साउन २० गते निवेदन दिएकाे थियाे । जसमा २०७७ साल पुष १७ गते धिताेपत्र बाेर्डले परिमार्जित कागजात प्राप्त गरेकाे विवरण बाेर्डकाे वेवसाइटमा राखिएकाे छ । कम्पनीकाे बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेकाे छ । कम्पनीले ७ साल ३६ हजार २ सय ८६ कित्ता आइपिओ जारी गर्ने भएकाे हाे ।
९.मध्य भाेटेकाेशी जलविद्युत आयाेजना
आइपिओ जारी गर्न मध्य भाेटेकाेशीले एक कराेड पचास लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्ने भएकाे हाे । कम्पनीले २०७६ साल माघ १० गते नै धिताेपत्र बाेर्डमा आवेदन दिएकाे भएपनि हालसम्म स्वीकृति पाइसकेकाे छैन । कम्पनीकाे आइपिओ बिक्री प्रबन्धकमा भने ग्लाेबल आइएमइ क्यापिटल रहेकाे छ ।
जाल्पा लघुवित्तले ५ लाख २२ हजार कित्ता आइपिओ जारी गर्ने
१०. न्यादी हाइड्राेपावर
न्यादी हाइड्राेपावर लिमिटेडले आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धिताेपत्र बाेर्डमा गत मंसिर १० गते निवेदन दिएकाे थियाे । ४० लाख ५० हजार कित्ता आइपिओ निष्कासनका लागि निवेदन दिएकाे कम्पनीकाे बिक्री प्रबन्धकमा ग्लाेबल आइएमइ क्यापिटल रहेकाे छ ।
११. विन्ध्यवासिनी हाइड्राेपावर
विन्ध्यवासिनी हाइड्राेपावरले आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धिताेपत्र बाेर्डमा २०७६ माघ १ गते नै निवेदन पेश गरेकाे थियाे । तर आवश्यक प्रकृया पुरा नगरेकाे भन्दै धिताेपत्र बाेर्डले अन्य कागजात मगाएकाे र उक्त कागजात पेश गरिसकिएकाे कम्पनीले जनाएकाे छ । २५ लाख कित्ता आइपिओका लागि निवेदन दिएकाे कम्पनीले धिताेपत्र बाेर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात आइपिओ जारी गर्नेछ । कम्पनीकाे बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेकाे छ ।
Previous articleट्रायल पास गर्नासाथ लाइसेन्स पाइने,७० अंक ल्याए पुग्ने
Next articleब्राेकरले T+2 पालना नगरेकाे भन्दै प्रशासन कार्यालयमा उजुरी (उजुरीसहित)